Ciidamada militariga Colombia oo la sheegay in ay sanado ka hor gaysteen dilal sharci darro ah | Star FM
Home Caalamka Ciidamada militariga Colombia oo la sheegay in ay sanado ka hor gaysteen...
Ciidamada militariga Colombia oo la sheegay in ay sanado ka hor gaysteen dilal sharci darro ah
Maxkamad gaar ah ayaa sheegtay in ciidamada difaaca ee wadanka Colombia ay intii u dhexeysay sanadihii 2002-dii iyo 2008-dii ugu yaraan 6,400 oo qof ay qaab sharci darro ah ku dileen.
Tiradan ayaa saddex jibbaar ka badan mid horay loo qiyaasay.
Dilalkan ayay ciidamadu horay sheegeen inay yihiin dhimashooyin ka dhashay isku dhacyo.
Maxkamadda gaarka ah ee qaabilsan cadaaladda la xiriirta amniga ee (JEP) ayaa arrimahan shaaca ka qaadday iyada oo dhanka kale baareysa falal dambiyeedyo la gaystay xilli 50 sano ay dagaallo u dhexeyeen saraakiisha dowladda iyo kuwa kacaanka Colombia ee (FARC).
Previous articleUK iyo Canada oo cunaqabatayn saaray taliyaasha militariga Myanmar